I-Balise Marina Villa - I-Airbnb
Black River, Rivière Noire District, i-Mauritius
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Rahul
A KANYE OKUSONDOLOZENI!
Isikhathi nokukhathazeka komhlaba wonke kuzonyibilika njengoba ubanjwe ngukuzola kwale ndawo enhle.
Okuhle kakhulu kobuciko base-Mauritania de vivre.
Ukuzuza ekufinyeleleni okuqondile kolwandle lapho usendaweni yakho yokungena.
Ngokuyinhloko itholakala edolobheni elithandwayo ogwini olusentshonalanga olunelanga lwase-Mauritius.
Uhambo olubonakalayo - www labalisemarina com/virtualtour/La_Balise/
Konke odinga ukukwazi mayelana nokuhlala kwakho kwesikhathi esizayo - www labalisemarina com
I-villa enethezekile engasolwandle ekuhambeni kwemizuzu engu-15 ukusuka e-La Preneuse beach yomphakathi engolunye lwamabhishi amahle kakhulu okubhukuda ogwini lwase-West
Uhlu lwezinto ezenziwayo lusemnyango wakho uma ungumhlali wase-La Balise Marina. Lokhu kuhlanganisa :
- Ukuqasha isikebhe
- Indawo yokudlela ne-bar
- isikhungo sezohwebo se-L '
estuaire - Imisebenzi Nautical ezifana big umdlalo ukudoba, ukubukela dolphin, njalo njalo.
- Amasiko Spa
Flic-en-Flac kuyinto 9 km ukusuka La Balise Marina.
Isitolo esidayisa ukudla, indawo yokuthenga, amabha ambalwa nabantu abathandekayo abaseduze kwale ndawo.
Abantu bazo zonke izizinda bamukelekile! Sizozama konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto engenakulibaleka:)
4.55 out of 5 stars from 54 reviews
4.55 · 54 okushiwo abanye
Idume ngemvelo yayo engaphelele, i-crystal-clear turquoise lagoons kanye nemisebenzi eminingi ye-nautical, i-Black River ihlanganisa ubuhle bedolobhana elivamile nezindawo zanamuhla, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, izikhungo zokuthenga kanye nemisebenzi ye-nautical efana ne-scuba diving, i-snorkelling kanye nokuzilibazisa ngesikebhe. Ibuye idume ngokubuka i-dolphin.
Black River kuyinto mecca big-fish. Yaziwa emhlabeni wonke ngokuba isikhungo ukudoba ezijulile-olwandle esifundeni, amateurs aficionados abavela emhlabeni wonke beze hook marlin, shark, wahoo, dorado, tuna noma bonito.
Kusuka emakethe yasendaweni nezinhlanzi zayo ezintsha nezindawo zokuthenga eziphilayo kuya ezikhungweni zokuthenga zikanokusho kanye nemikhiqizo yazo yamazwe ngamazwe, ukuthenga kuhle kakhulu ku-Black River. Izitolo ezinkulu nezitolo zokudayisa nazo zingatholakala kalula.
I-Black River ingenye yalezo zindawo ezinamasiko amaningi lapho abantu bendawo nakwamanye amazwe behlala khona ngokuvumelana njengomakhelwane, okwakha umqondo omuhle kakhulu
lo mphakathi. Lokhu kwahlukahluka, okufaka isandla ebuhleni
besifunda, kubonakala emphakathini oncomekayo ngokudla kwawo
futhi izilimi. Kusukela Tamarin Falls ukuba Casela Leisure and
Nature Park, phansi Black River Gorges National Park futhi Chamarel ezindaweni eziphakeme naphezu, the West Coast inikeza eziningi imisebenzi yangaphandle. Kusukela igalofu at ezintathu eziseduze 18-umgodi igalofu (Tamarina, Paradis, Heritage Golf Club)
ukugibela amahhashi, ukugijima, ukuhamba ngebhayisikili entabeni noma ukuhamba ngezinyawo, uMfula omnyama uhlangabezana nezidingo
umthandi wemvelo Ngaphezu kwalokho phansi, ngakuLe Morne, umi e-Benitier Island, idwala lentaba-mlilo emanzini acacile e-lagoon.e izindawo zokutshuza ze-surfing ezidumile emhlabeni "Iso elilodwa" e-Le Morne ne- "Dale" e-Tamarin ziyiPharadesi labatshuzi. I-Le Morne nayo iyindawo efunwa kakhulu
yokudluliselwa komoya nokudluliselwa kwekhayithi.